အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအဝိုင်းသရ - ဝီကီပီးဒီးယား
Vowel sound in some languagesတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:Vowel sound in some languages
အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအဝိုင်းသရ (အင်္ဂလိပ်: near-close front rounded vowel, or near-high front rounded vowel) သည် သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် ⟨ʏ⟩ သင်္ကေတဖြင့်ပြ၍ X-SAMPA ပုံစံဖြင့် Y ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်း၏ လက်စွဲစာအုပ်တွင် [ʏ] အက္ခရာကို အလယ်တစ်ဝက် (mid-centralized) ၊ အရှေ့နီးပါး (close front) ၊ နှုတ်ခမ်းဝိုင်းကာ ရွတ်ဆိုရသော သရဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီး လက်ရှိ ဤအက္ခရာ ⟨ʏ⟩ ၏ တရားဝင်အမည်မှာ near-close near-front rounded vowel (အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအဝိုင်းသရ) ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒန်းညာ ဂျုံးဇ် နှင့် ဂျွန် စီ. ဝဲလ်စ် တို့ တီထွင်ထားသည့် အခြေခံသရများနှင့် ပတ်သက်၍ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာစိစစ်ချက်များက "အရှေ့ အဝိုင်း အခြေခံသရများအားလုံးသည် အသံထုတ်လုပ်မှုအရ အရှေ့နီးပါး (အရှေ့-အလယ်) များဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုထား၏ ။ ဤ၌ [y] အက္ခရာသာမက [[[:တမ်းပလိတ်:IPAplink]], တမ်းပလိတ်:IPAplink, တမ်းပလိတ်:IPAplink]များကိုပါ ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် [ʏ]သည် အခြေခံသရ [y] ([y˕]တို့အောက် နှိမ့်ထားသော သရတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး အခြေခံသရ [y] နှင့် အခြေခံသရ [ø] တို့ကြား၌ တည်ရှိသည်။ အသံသည် မြန်မာစကား၏ (အစ်) အသံနှင့် ဆင်တူသည်။
ယခုဖော်ပြပါ [ʏ] (အစ်) သရ၌ လျှာသည် ခံတွင်း၌ အပိတ်နီးပါးရှိရ၍ အပိတ်သံ အထိ မရှိရပေ။
လျှာ၏ ရှေ့နောက် အနေအထား၌ လျှာသည် ခံတွင်း၏ အရှေ့ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည်။ သို့သော် ဗျည်းသံဖြစ်ပေါ်သည်အထိ ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းမပြုရချေ။ အရှေ့အဝိုင်းသရများသည် အများအားဖြင့် အလယ် (သို့) အရှေ့နီးပါးသရများ ဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။
↑ International Phonetic Association (1999), pp. 13, 171, 180.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အရှေ့နီးပါးအပိတ်နီးပါးအဝိုင်းသရ&oldid=706997" မှ ရယူရန်